Mobile App Development - Saturngod Saturngod
 10th April 2011
အစအဆုံး နားထောင်သွားပါတယ်။ မသိသေးတာတွေ တစ်ချို့ သိလိုက်ရတယ်။ 🙂 samsung ရဲ့ Bada နဲ့ Nokia ရဲ့ Maemo ကော ဈေးကွက် မရှိနိုင်ဘူးလား။
Bada OS အတွက် application ပေါင်း 2011 first quarter မှာ 3000 ပဲ ရှိသေးတယ်။ Nokia က windows phone7နဲ့ ရှေ့ဆက်မှာဆိုတော့ Maemo ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက Intel ရဲ့ လက်ထဲ ရောက်သွားပါပြီ။ Mameo ကတော့ အခြေအနေက ကောင်း​ပေမယ့် developer တွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ မရှိဘူး။ လူသုံးလည်း အရမ်းနည်းတယ်။ Nokia သမားတွေက Maemo ထက် Symbian ကို ပိုသဘောကျနေတာကြောင့် ဈေးကွက်အနေနဲ့ ဝင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ဆိုရမယ်။ တခြားနေရာမှာ ပေါက်ထားတဲ့ game တွေ ကသာ ဈေးကွက်အသစ်အနေနဲ့ ဝင်ရောက်လာနိုင်တာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပါ အကိုရေ.. မသိတာတွေ အကုန် သိလိုက်ရပါတယ်။
Plea how to jailbrakes to phone for Myanmar language.
i am trying to open pdf file by using MVC2web application and Jquery Mobile. But pdf file doesn't open it well.How shall i do and which tools can i use to open pdf .plese let me know jquery mobile can be able to open pdf file .
??? open pdf like what ? when you add link to pdf , it will be download.
သုံး ချင်တာက iphone နဲ pdf ကို ဖွင့်ဖတ်ချင်တာပါ..အဲဒါ.. vs 2010 mvc2နဲ ရေးချင်လို.
mvc2နဲ ရေးထားတဲ site ကို iphone မှာကြည့်လိုရပါမလားအစ်ကို...
jquerymobile နဲ mvc တွဲ သုံးတာလဲ pdf ဖွင့်တာ ဘာမှပွင့်မလာဘူး... အဲဒါကြောင့် mvc2နဲ ပဲရေးကြည်တာ..
ဖြစ်ချင်တာက link ကို click လိုက်ရင် pdf ကို ဖွင်ကြည်မှာလား ? download လား မေးချင်တာ user က ကြိုက်ရာရွေး လို့ရအောင်....
အဲဒါ jquery mobile မသုံးပဲနဲ MVC2နဲ mobile phone မှာ run လိုရပါမလား...
သုံးမှရမယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်........
you should ask on http://www.mysteryzillion.org ... pdf can open from safari . if you can't open , it'saproblem from server side. jquery mobile and ASP.NET is HTML output and it can run on safari. it's website.
Ornagaime Giveaway Before host on VPS